अमेरिका र भारतबिच पनि व्यापारिक खटपटको संकेत ! - Experience Best News from Nepal
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारतमाथि लगातार बजार खुकुलो बनाउन दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदी भने ट्रम्प प्रशासनसँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनन् ।
तर, राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यवहारले मोदीका लागि ट्रम्प प्रशासनसँग नजिकको सम्बन्धमा रहन अथवा दूरी बनाउन दुबैका लागि महंगो मूल्य भुक्तान गर्नुपर्ने देखाएको छ । गत शुक्रबार ट्रम्पले भारतलाई ‘विशेष कारोबार साझेदार’ को श्रेणीबाट हटाउने घोषणा गरेका थिए । भारत दशकौंदेखि अमेरिकाको उक्त कारोबारको श्रेणीमा थियो ।
अमेरिकाले केही विकासशील राष्ट्रहरुलाई आफ्नो मुलुकसँग हुने कारोबारमा कर छुटको सुविधा दिएको छ । जसमा भारत पनि समावेश छ । यसका कारण अमेरिकाबाट हुने केही विशेष निर्यातमा भारतले कर तिर्नु पर्दैन । अमेरिकाका तर्फबाट प्राप्त उक्त छुट भारतसित घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध प्रोत्साहित गर्नका लागि थियो ।
मार्च महिनाको सुरुवातमा नै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी कांग्रेसमा भारतलाई ‘विशेष कारोबार साझेदार’ बाट हटाउन लागिएको जानकारी दिएका थिए । ट्रम्पको उक्त निर्णयलाई मोदीमाथि भारतमा अमेरिकी बजारलाई खुकुलो बनाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने राणनीतिका रुपमा हेरिएको छ ।
अमेरिकाले भारतीय बजारमा आफ्ना मेडिकल डिभाइस र डेरी उत्पादन बढाउने चासो देखाउँदै आएको छ । तर, त्यसका लागि मोदी सरकारले अनेक शर्तहरु अगाडि सारेको छ । गत शुक्रबार ट्रम्पले भनेका थिए, ‘‘भारतले आफ्नो बजारमा अमेरिकालाई उचित र पर्याप्त पहुँच बढाउन दिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छैन् ।’’
अमेरिकी मोटरसाइकल ‘हार्ली डेभिडसन’ माथि भारतमा भारी मात्रामा कर लगाइएको भन्दै कयौंपटक ट्रम्पले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । अमेरिकन टेक्नोलोजी कम्पनीहरु भारतमा विदेशी ई–कमर्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा लगाइएका अनेक प्रकारका शर्तहरुबाट रुष्ट छन् ।
भारतले विदेशी ई–कमर्स कम्पनीहरुका लागि भारतमै ‘डेटा स्टोर’ राख्नुपर्ने र प्रशासनलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्य शर्त निर्धारण गरेको छ ।
भारत र अमेरिका नवौं ठूला कारोबारी साझेदार हुन् । भारतको ‘जेनर्लाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफ्रेन्स’ (जीएसपी) अन्तरगत अमेरिका निर्यातमा जुन छुट मिलेको थियो त्यसको अत्यन्तै फाइदा थियो । जीएसपीको दायराबाट भारतलाई हटाइएपछि अमेरिकामा केमिकल, अटो पार्ट्स र भाँडाकुँडाको निर्यातमा भारतले सात प्रतिशत बढी कर भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ ।
ट्रम्पको यो निर्णयप्रति भारतको प्रतिक्रिया अत्यन्तै सजक र सतर्क थियो । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले आफ्नो बयानमा आफ्नो मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकासँग व्यापार सम्वाद जारी राखिने बताएको थियो ।
भारत विरुद्ध आफु झुकेर भएपनि दुइ देश बीच युद्ध टार्ने इमरान खानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार !!
पाईलट रिहा गर्दे पाकिस्तान, मोदीलाई इमरानले दिए चेतावनी सहितको जवाफ !
राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाइ ध्वस्त हुन बाट बचाए, के रहेछ रहस्य
जन्मदेखिकै युद्ध: कहिले-कहिले भयो भारत र पाकिस्तान द्वन्द्व ? जान्नुहोस्
भाजपाको ऐतिहासिक जित, फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुँदै नरेन्द्र मोदी !
भारतीय कांग्रेस पार्टीकी महासचिव प्रियंका गान्धी पक्राउ !
अमेरिका भ्रमणमा जाँदा होटलमा नबस्ने इमरान खानको निर्णय, खर्च जोगाउन दूतावासमा रहने !
राहुल गान्धीपछि अब को बन्ला भारतमा कांग्रेस अध्यक्ष ?
चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्य नौ करोड, सदस्य बन्न यस्ता छन् मापदण्डहरु